Mpisolovava lova any Dubai UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Lalànan'ny lova: Fitsarana UAE momba ny fizarana fananana
Lalànan'ny tena manokana
Ny lalàna fototry ny lova any UAE dia ny lalàna Sharia ary miorina amin'ny lalàna federaly sasany izay namboarina. Ankoatr'izay, ny lalàna voalohany mifehy ny fifandimbiasana dia ny lalàna sivily sy ny lalàna manokana.
tsy firenena nasionalin'ny UAE ianao
Lalàna momba ny lova any UAE
ny lalàna momba ny lova any UAE dia mety ho sarotra
Ny lalàna momba ny lova any UAE dia midadasika be ary afaka mandray ny olon-drehetra na inona na inona fireneny sy fivavahany. Ny fahombiazana ho an'ny Silamo dia fehezin'ny lalàna Shariah izay omena alalana tsy silamo hisafidy ny lalàna ao amin'ny firenena niaviany. Ny Lalàn'i Shariah dia mahay mandika sy manova bebe kokoa.
Vokatry ny zavatra nialoha lalana
Ankoatr'izay, amin'ny maha-tompon'andraikitra ara-dalàna sivily, ny fiantraikan'ireo teo aloha dia tsy azo atao raha oharina amin'ny lalàna momba ny lalàna mahazatra. Raha oharina amin'ny manampahefana sasany, tsy manaraka ny zon'ny mpamonjy aina i UAE izay omena fananana miaraka amin'ireo tompony velona sy ny fitsarana UAE dia manana fahefana manokana hanapa-kevitra momba izany.
Ny taranaka sy ny mpandova dia manan-jo hitaky
Ny taranaka sy mpandova dia manan-jo hitaky ny fananan'ny maty araka ny lalàn'i Shariah ho an'ny Silamo. Ny mpahazo tombontsoa dia mety mitaky ilay fananana raha tsy olona Silamo raha misy sitrana ara-dalàna. Raha ny finoana silamo efa maty dia tsy ho afa-tsy amin'ireo izay mahafeno fepetra ho mpandova araka ny fitsipiky ny Sharia ihany ilay tany.
Fitsipika momba ny lalàna Shariah
Ny dingana ho an'ny fitsarana raha toa ka maty ny silamo dia ny mamaritra ny mpandova ary hanamafy izany amin'ny alàlan'ny vavolombelona roa lahy izay manana porofo ara-taratasy toy ny taratasy fanamarinana momba ny fahaterahana sy ny mari-panambadiana. Miorina amin'ny fitsipiky ny Sharia, ny zafikely, ray aman-dreny, vady, zanaka, zanak'olo-mpiray tam-po, na zanak'olo-mpirahalahy, ary mpirahalahy dia heverina ho mpandova amin'ny fananana.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny TOKONY?
INDRINDRA no fitaovana iray fahita indrindra ampiasaina amin'ny fandefasana ireo fananana ho an'ny mpandova izay nofidian'ny maty. Izy io dia manome antsipirihany ny fomba tadiavinao hizara ny toekarena aorian'ny fahafatesanao.
Ho an'ny tsy famoahana ny hoe iza no tsy maintsy mandova ny fanananao, dia mety ampiasaina ihany koa ny fampandrenesana ny faniriana sasany ao anatin'izany ny fanomezana manokana, ny mpanatanteraka, ary ny mpiambina mandritra ny fotoana maharitra ho an'ny zaza. Ankoatra ny sitrapo, ny olona iray ihany koa dia afaka miala amin'ny fametrahana drafitra stratejika kokoa ao anatin'izany ny vahaolana mahomby kokoa amoron-dranomasina na fametrahana ny fahatokisana.
Fa maninona no tokony hanana INDRINDRA any UAE?
Ho an'ny expats monina any UAE, misy antony tsotra anaovana finiavana. Nilaza ny tranonkala ofisialin'ny Governemanta Dubai fa ny Fitsarana UAE dia hanaraka ny lalàn'i Shariah amin'ny toe-javatra rehetra izay tsy misy sitrapo. Midika izany fa rehefa maty ianao raha tsy misy drafitra fifandimbiasana na finiavana, ny fitsarana eo an-toerana dia handinika ny toeranao rehetra ary mizara izany amin'ny lalàna Sharia. Ohatra, ny vady manan-janaka dia mahazo ny 1/8 amin'ny fananan'ny lehilahy maty.
Raha tsy misy ny drafi-ponenana na amin'ny toerany dia apetraka avy hatrany ny fizarana. Ny fananan'ny olona tsirairay avy ao anatin'izany ny kaonty amin'ny banky dia hangatsiaka mandra-pivoahana ny fandoavana. Na ny fananana ifampizaràna aza dia mamanala mandra-pahatongan'ny olan'ny lova avy amin'ny fitsarana any an-toerana. Tsy misy ihany koa ny famindrana fizarana mandeha ho azy izay misy raharaham-barotra.
Olana amin'ny ankapobeny mandova
Matetika matetika dia tsy ny olana no miahiahy amin'ny ekspert izay nividy fananana tany UAE na tamin'ny anarany na tamin'ny vadiny. Mety ho sahiran-tsaina izy ireo hoe amin'ny inona ny lalàna momba ny lova no ampiharina amin'ny fananany ary mazàna no mieritreritra fa ny lalàna ao amin'ny fireneny dia mivoaka ho azy noho ny lalàna ao an-toerana any UAE.
Ny fitsipika volamena amin'ny ankiby dia ny olana momba ny lova amin'ny tranga toa itony mifototra amin'ny Sharia. Ny fahombiazana eo ambanin'ity lalàna ity dia miasa amin'ny rafitry ny fizarana voatokana na lova terena.
Ho an'ireo tsy Silamo, manan-jo hanao fisoratana anarana amin'ny DIFC WPR izy ireo izay hanome antoka azy ireo amin'ny fandalovany ny fananany any Dubai ho any amin'ny mpandova voafidy na afaka mamindra ny fananana trano any amin'ny orinasa hafa any ivelany izy ireo. Ny vahaolana natolotra dia miankina amin'ny tranga tsirairay avy amin'izany dia tsy maintsy tadiavina ny dinika ara-dalàna hatramin'ny voalohany.
Maninona ianao no mila manakarena mpisolovava amin'ny lalàna mandova an'i UAE?
Betsaka ny antony tokony hampanananao manampahaizana mpisolovava amin'ny lalàna momba ny lova ao UAE. Ny sasany amin'ireto dia ireto manaraka ireto:
Ny Lalànan'ny lova ao UAE dia tsy mitovy amin'ny firenena hafa
Raha mieritreritra ianao fa ny firenena ao an-tranonao dia manana lalàna mitovy rehefa tafiditra amin'ny lalàna momba ny lova any UAE, dia mety hahita olana ianao. Ianao dia tsy maintsy marihina fa ny lalàna, na inona na inona sehatra, dia hafa noho ny firenena amin'ny firenena iray. Raha manana ahiahy momba ny lova any UAE ianao dia tsy maintsy mitady fanampiana ara-dalàna avy amin'ny mpisolovava miorina ao UAE ary manam-pahaizana amin'ny lalàna momba ny lova.
Ny lalànan'ny lova any UAE Tsy tsotra raha takarina
Na inona na inona olana atrehinao dia tsy maintsy fantarinao fa ny lalàna momba ny lova any UAE dia mety ho sarotra ary tsy tsotra tahaka ny ankamaroan'ny eritreritrao. Tena marina izany raha toa ka tsy firenena nasionalin'ny UAE ianao ary tsy manana fanazavana momba izay lalàna sy fitsipika eo ambanin'ity lalàna ity ianao.
Raha firenena nasionalin'ny UAE ianao ka tsy te hiaina zava-manahirana na olana hafa misy amin'ny lovanao, dia tsara kokoa ny manakarama mpisolovava hanampy anao. Na eo aza ny fahalalanao momba ny lalàna momba ny lova any UAE, dia mety hitranga ny raharaha ara-dalàna amin'ny mpisolovava iray.
Mahatsapa fiadanan-tsaina raha miatrika olana momba ny lova
Ny mpisolovavanao voafidy no ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra rehetra ilainao mba hamahana ny olanao ara-dalàna. Na lehibe na kely ny olanao, dia mahazo matoky ianao fa ny mpisolovava lova avy any UAE manana traikefa ary mahafeno fepetra dia tsy hanome anao afa-tsy ny fiadanan-tsaina sy fahamailoana mandritra ny dingana rehetra.
Manakarama ny mpisolovava UAE mpandova tena tsara ankehitriny!
Mpitsoa-ponenana maro monina any UAE no tsy mahalala fa amin'ny tsy fisian'ny TOETANA, eken'ny rafi-pitsarana UAE, ny fomba na ny fomba famindrana ny fananany aorian'ny fahafatesana dia mety mandany fotoana, lafo vidy ary feno fahasarotana ara-dalàna.
Raha ny resaka momba ny lova any Dubai UAE dia hendry foana ny manakarama mpisolovava amin'ny asa. Tena marina izany indrindra raha ianao expat ary tsy zatra ny lova ao UAE. Tsarovy fa ny lalàna momba ny lova dia tsy mitovy amin'ny firenena iray. Ka alaivo mikaroka ny mpisolovava lova tena tsara any Dubai UAE mba hiaina fiadanan-tsaina.
Arovy ny ankohonanao sy Asset